Caasaa burjaajessaa OPDO – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooCaasaa burjaajessaa OPDO
Mootummaan bara darbe irraa eegaluun caasaa kijibaa hojjattoota mootummaa ittiin burjaajessu qopheessaa jira. Caasan bara darbee sadarkaa biyyaatti hojjataa ittiin burjaajessaa turan kan maqaa qorannoo caasaa jedhuun dabballoonni EPRDF maallaqa biliyoonan ittiin saamaa turaniidha. Caasan JEG bara darbe qorannoof jedhamee maallaqni miliyoona hedduun itti dhangala’e osop hojirra hin oolin mootummaan naannoo Oromiyaa caaseffama hojjataa mootummaa jechuun bara kanallee qorannoo caasaf jechuun maallaqa biliyoonan irratti dhangalaasudhaan caasaa haarawa manneen hojii mootummaaf erguun hojjataa ittiin burjaajessaa jira. Caasan kuni caasaa kijibaati. Caasan kuni tajaajila uummataa saffisiisudhaaf osoon taane dabballoota OPDO kan yeroo yeroon maqaa qorannootin maallaqa uummataa saamaa jiraniif karaa saaqaa jira.
Caasan haarofti amma bahe barattoota muuxannoo 0 qaban kan yuunivarsitii keessaa eebbifaman kan hin affeerredha. Caasan kuni humna namaa dabalee humna haarawa yuunivatsitii eebbifameef carraa banuu kan qabu humna namaa hirdhisuun carraa qacarrii barattoota haarawa yuunivarsitii eebbifamanii kan hirdhisuu fi barattoota haarawa kan muuxannoo waggaa 0 qaban gonkumaa kan hin hammannee fi xiyyeeffannoo hin kennineefidha.
Caasan haarofti MNO baase kuni yeroo ammaa sababa caasaa kanaatin hojjataan burjaaja’ee hojiin uummataa akka hin hojjatamne gochaa jira. Caasan kuni seektaroota mootummaa keessaa hojjattoota hedduu hojiin ala gochuun hojiin akka dhaabbatu gochaa jira. Kana malees haalli hojmaata caasaa kanaa iftoominaa fi qajeelfama ifaatin waan hin hojjatamneef dabballoonni OPDO caasaa kana akka isaanif tahutti hiikkachuun nama hin jaallanne ofirraa fageessaa nama jaallatan immoo bakka barbaadan kennaafii jiru. Caasan kuni dandeettidhaan dorgommiin hojjatama kan jedhu kijiba adiidha. Dandeettii wanti jedhu hin jiru. Dandeettii kan jedhamu madaallii sobaa kan dabballoonni OPDO nama barbaaddef guddistee kan barbaadde immoo irraa hirdhisaa kenniteefi.
Dandeettin hojjataa kan madaalamuu fi wal dorgomuu qabu gosa ogummaa irratti dorgomuu barbaadu irratti qormaanni gahumsaa kennamee wal dorgomuun tahuu qaba malee qabxii tilmaamatiin dandeettii namaa madaalun hin dandahamu.
#OPDOn Oromoo Abbaa biyya gadi dhiibde nu xiiqeesite, horma nu goote, waraana Oromoo qoofa hiikachifte kampi gaafuma galchitu ganamu isaa Amhara firra goodhate farasite goola seensifate guyya guyyan Gamoo Minilikti afeera bate hara kuno OPDO dhalte Ango irra gudhachuf deemti.
ኦዲፕ በግንቦት 7 ተዋጤች ከ3 ወር ቦሃላ ODP የሚባል ድርጅት የለም:: ODPN GINBOT 7 LIQIMFAMTE DHABNI ODP JEDHAMU JI‘A 3 BOODDA HINJIRU.ሀገሬ ኦርሚያ የሞተልሽ ቄሮ ቀርቶ የገደለሽ ግንቦት 7 በላሽ::እንደ አፅ ሀይለስላሴ እና በላይ ዘለቀ አይነት::
Adaamaan kan Amaaraafii uummata Itiyoophiyaati jechuun hiriira gaggeessaa jiru. Nafxanyoonnii magaalaa Adaamaa nuti dhalattoota Amboofii Arsii, akkasumas wallaggaa dhufaniin hin bullu. Kanuma keenyaan buluu qabna. Mootummaan jara kana lafavjiranitti afaan hin qabsiisu yoo ta’e Qeerroon afaan qabsiisuuf qophii xumureera. Kanuma dubbiin!
Yeroo itti Waa’ee Oromoo fi Oromummaatiif tokkummaan dhaabannu irra geenyee jirra.
Kanaaf;Aktivistoota Amahaaraa ykn warra sammuu weeraraa qaban waliin walii galuuf hubachiisuuf warra Oromummaa fi Oromiyaa balleessuuf duula geggeessu waliin dhaabachuun dhibaayuudha.
Kanas;Waliin irratti duuluu qabna.
Oromummaa fi Oromiyaa xiqqeessuu fi arrabsoo gama FB’n dhoobamu kamiyyuu waliin deebii kennuu,mormuu qabna.
Mootummaan ijaarsa seeraan alaa weerartoota ykn godaantota lafa Oromoo seeraan ala qabame yeroo diigsisaa jiru deeggaruu,Mootummaa waliin hiriiruu qabna.
Aktivistoonni Amahaaraa Injinar Taakkalaa,Abiyyi fi kkf yeroo arrabsoo garagaraan irratti duulan akka Uummata oromoo arrabsanii,xiqqeessaniitti fudhachuun deebii quubsaa kennuu qabna.Maal na dhibdeen bira darbuu hin qabnu.
Oromoon hundi dhimma Finfinnee fi Federaaliziimii irratti araarama tokko malee ejjennoo tokko ykn wal fakkaatu qabaachuu qaba.
Uummanni Oromoo Finfinnee fi Naannoo ishee diinagdeen humneeffamuu qaba./
Durii yeeroo nun oromoo diina nu gootan amhara goola seensifata lakkisa dhisa nu dhiga keesan yeeroo jeenu unin nu ukamsitan nafxanya hin farsina goola oromoo hin seensisina yeerro jeenu nu dhagau didan, habasha keesatu amarii siin baleesu jeene siin gorsisan akka dhuphumati nu fudhatan miti, gaafa wallaga beelan dhumu isiin immboocii baleesuf milloona 10 batan biyya horma hin deemne? Wallga diina goota loltu amhara biyya amarati fidan wallagati hin boobafne? Badi keesan yoomi siirefatan?